လူ ကို ဖန်ဆင်းခြင်း - Course 3, Lesson 2
New Life in Christ Course 3. Lesson 2
ဖတ်ရန်ကျမ်းချက်။ (က၊ ၁း၂၆-၃၁။၂း၁-၂ဝ)
သော့ချက် ကျမ်းပိုဒ်။ ''တဖန် ဘုရားသခင်က၊ ငါတို့ ပုံသဏ္ဍာန်နှင့်တညီတသဏ္ဍာန်တည်း လူကိုဖန်ဆင်းကြစို့။ သူသည်... မြေတပြင်လုံး နှင့်တကွ၊ မြေပေါ်မှာ...အုပ်စိုး စေဟုအမိန့်တော်ရှိ၏။''(က၊ ၁း၂၆)
ဘုရားသခင်သည် စင်္ကြာဝဠာနှင့်စင်္ကြာဝဠာ၌ရှိသော အရာခပ်သိမ်း၏ ဖန်ဆင်းရှင်ဖြစ်ကြောင်း လေ့လာခဲ့ရပြီ ဖြစ် သည်။ သူသည် အသက်ရှင်သော သတ္တဝါများ၊ ငှက်များ၊ ငါးနှင့်တိရစ္ဆာန်များကို ဖန်ဆင်းတော်မူပြီ၊ တည်မြဲသော ဥပဒေသ အတိုင်း မိမိတို့၏''အမျိုးအလိုက်'' ပြန်လည် ပွါးများရသောအခွင့်နှင့်စွမ်းရည်ကို ပေးတော်မူ၏။ ''အမျိုးအလိုက်''ဟူသောစာပိုဒ်ကို ကမ္ဘာဦးကျမ်း ပထမ အခန်း၌ ရှစ်ကြိမ် တိုင် ပြန်လည် ရေးသားထား၏။ ဆိုလိုသည်မှာ အသက်ရှင်သော သတ္တဝါတိုင်းသည် အမျိုးအလိုက်နှင့်မိမိတို့၏မျိုးအလိုက်သာလျှင် များပြားစွာ မွေးဘွားနိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။ မည်သည့်တိရစ္ဆာန်မျှ အခြားမတူညီသော တိရစ္ဆာန် အဖြစ်သို့ မပြောင်းလဲနိုင်ပါ။ ဤ ဥပဒေသသည် ထိုနေ့မှစ၍ ယနေ့တိုင် မှန်ကန်လျက်ရှိသည်။ အသက်ရှင်သော သတ္တဝါတိုင်း မိမိမျိုးအလိုက်သာ မွေးဘွားကြရသည်။
Read more: လူ ကို ဖန်ဆင်းခြင်း - Course 3, Lesson 2
လူမည်သည်ကား ..Course 3, lesson 1
“လူမည်သည်ကား ခရစ်တော်၌ရှိလျှင် အသစ်ပြုပြင်သော သတ္တဝါဖြစ်၏။” (၂ကော ၅း၁၇)
Welcome to Course3of New Life in Christ
ဤသင်ခန်းစာသည် စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းသာ သင်ခန်းစာဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ဘဝ၏ အရေး အကြီးဆုံး မေးခွန်းများ၏အဖြေကို ရှာဖွေကြမည်ဖြစ်သည်။
ဘုရားသခင်၏ သားသမီးတစ်ယောက် မည်သို့ဖြစ်လာနိုင်မည်နည်း?
ခရစ်ယာန်အသက်တာကို ကျွန်ုပ်မည်သို့ အသက်ရှင်ရမည်နည်း?
Read more: လူမည်သည်ကား ..Course 3, lesson 1
ကျူးလွန်သောအပြစ် - ကယ်တင်ခြင်းသင်္ခန်းစာများ
သင်ခန်းစာ (၄)၌ မွေးရာပါအပြစ်အကြောင်း သိရှိ ခဲ့ရပြီ။ယခုမွေးရာပါ အပြစ်၏ အသီးအပွင့်ဖြစ်သော ကျူးလွန်သော အပြစ် အကြောင်းကို လေ့လာရမှာဖြစ်သည်။
သခင်ယေရှုက-အသီးအားဖြင့်အပင်၏သဘောကိုထင်ရှား သည် ဖြစ်၍အသီးကောင်းလျှင် အပင်ကောင်းသည်ဟု ဆိုကြလော့၊ အသီး မကောင်း လျှင်အပင်မကောင်းဟုဆိုကြလော့-ဟုဆိုထားသည် (မဿ၊ဲ ၁၂း၃၃)။ သခင်ယေရှုပြော သကဲ့သို့ ပင်သစ်သီး ကောင်း မကောင်း သည် အပင်နှင့် ဆိုင်သည်။ အပင်ကောင်းလျှင် အသီးကောင်း၍ အပင်မကောင်းလျှင် အသီး မကောင်းချေ။ အပင် မကောင်း ခြင်းသည်လည်း အမျိုးမကောင်းခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည်။ မျိုးကောင်းလျှင်အပင်ကောင်းသည်။ အပင်ကောင်းလျှင် အသီးကောင်း သည်။ ထို့ကြောင့် အသီးသည် အဓိကမဟုတ်။ မျိုးသို့ မဟုတ် အပင်သည်အဓိက ဖြစ်သည်၊
Read more: ကျူးလွန်သောအပြစ် - ကယ်တင်ခြင်းသင်္ခန်းစာများ
သင်ခန်းစာ (၅) ၌ကျူးလွန်သောအပြစ်အကြောင်းသင်ခဲ့ ကြပြီ။ လူသည် ကောင်းသော အကျင့်မကျင့်နိုင်ကြောင်းသိရှိခဲ့ကြပြီ။ ယခုလူတိုင်း ချစ်မြတ်နိုး၍ အသေအလဲ ကာကွယ်လိုသော အမျိုးအကြောင်းကိုလေ့လာကြစို့ ။ လူမျိုးတိုင်း မိမိအမျိုးကို နှစ်သက်မြတ်နိုး တတ်ကြသည်။ မိမိအမျိုးကို အမွှမ်းတင်တတ် ကြသည်။ အမျိုးကိုအထိမခံနိင်ကြ။ အမျိုးအတွက်အသေခံရဲကြသည်။ သူတပါး၏အမျိုးထက် ကိုယ့်အမျိုးသာ၍ကောင်း၊ ပို၍မြတ်သည်ဟု ယူဆတတ်ကြသည်။ အိမ်ထောင်ဖက် ရွေးချယ်ရာတွင်လည်း အမျိုးအကြောင်းကို ထည့်တွက် စဉ်းစားတတ်ြကသည်။ သို့ဖြစ်၍ အမျိုးအကြောင်းနှင့်ပတ်သက်၍ ဘုရားသခင်၏အမြင်ကို သိရှိ နားလည်ဘို့ လိုအပ်သည်။
Read more: မိန်းမအမျိုးနှင့်မြွေအမျိုး,...
မိမိကိုယ်ကို လက်ခံတတ်စေရန် သင်ယူခြင်း
Practical Christian Living Lesson Course 4
အဓိက ကျမ်းချက် ။ ။ ကျွန်ုပ်သည် ကြောက်မက်ဖွယ်သော လက္ခဏာ၊ ထူးဆန်းသောလက္ခဏာတို့နှင့် ပြည့်စုံသည်ဖြစ်၍ ....။ ဆာလံ ၁၃၅း၁၄
Read more: မိမိကိုယ်ကို လက်ခံတတ်စေရန် သင်ယူခြင်း
Read more: ကျူးလွန်သောအပြစ်-ကယ်တင်ခြင်းနှင့်ဆိုင်သော...
သင်ခန်းစာ (၃) ဘုရားနှင့်လူ အဆက်ပြတ်စေသော အရာသည် အပြစ်ဖြစ်ကြောင်းသိရကြပြီ။ ထိုအပြစ်ကိုဖယ်ရှားနိုင်မှသာလျှင် ဘုရားသခင်ကို နံဝိညာဉ်နှင့်ကိုးကွယ်နိင်မှာဖြစ်ကြောင်းသိရပြီ။ ထိုအပြစ်ကိုဖယ်ရှားနိင်ရန် အပြစ်အကြောင်းကိုပဌမဦးစွာသိဘို့လို သည်၊ လူနာ ကို ကုဘို့ရောဂါကိုအရင်ရှာ သကဲ့သို့ လူ၏အပြစ်ကို ဘုရားသခင်၏အမြင်အတိုင်းအရင်သိဘို့ လိုပါသည်။
ဘုရားအမြင်၌ အပြစ်နှစ်မျိုးရှိသည်။၄င်းတို့ မှာမွေးရာပါအပြစ် နှင့်ကျူး လွန်သောအပြစ် တို့ ဖြစ်သည်။
Read more: ကယ်တင်ခြင်းနှင့်ဆိုင်သော...
သင်ခန်းစာ(၂)၌ ထာဝရဘုရားသည် တလောကလုံး၏တရားသူကြီး ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရပြီ၊ ထိုတရားသူကြီးက သူ့ ကိုကိုးကွယ်သောသူသည် နံဝိညာဉ်ဖြင့် ကိုးကွယ် ရမည်ဟု ပညတ်ထားသည်။
သခင်ယေရှုက-ကိုးကွယ်သောသူမှန်သမျှသည် ခမည်းတော်ကို နံဝိညာဉ် နှင့်၎င်း သစ်္စာတရား (သမ္မာတရား)နှင့်၎င်း၊ ကိုးကွယ်ရမည့် အချိန် ကာလသည်လာ၍ယခုပင်ရောက်လျက်ရှိ၏။ အကြောင်းမူကား ထိုသို့ ကိုးကွယ်သောသူတို့ ကိုခမည်းတော်သည် အလိုရှိတော် မူ၏။ဘုရား သခင်သည် နံဝိညာဉ်ဖြစ်တော်မူ၏။ ဘုရားသခင်ကို ကိုးကွယ်သော သူတို့သည်နံဝိညာဉ်နှင့်၎င်းသစ်္စာတရား (သမ္မာတရား) နှင့်၎င်း ကိုးကွယ် ရမည်- ဟုမိန့် တော်မူ၏ (ယော ၄း၂၃-၂၄)။
Building Right Relationships (Part 1), Making True Friend
Practical Christian Living Course - Lesson 19
ပညာရှိတို့နှင့်ပေါင်းဘော်သော သူသည် ပညာရှိတတ်၏။ လူမိုက်တို့နှင့်ပေါင်းဘော်သောသူမူကား ပျက်စီးတတ်၏။ (သုတ္တံ၊ ၁၃း၂၀)
အထီးကျန်ခြင်းသည် လက်ရှိအချိန်ကာလတွင် အဖြစ်အများဆုံးပြသနာတစ်ခုဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။ ဤကမ္ဘာသည် အထီးကျန်သော လူများ နှင့်ပြည့်နှက်လျက်ရှိသည်။ လူတစ်ဦး၏နဘေးတွင် လူများစွာဝန်းရံ ထားသော်လည်း ထိုလူသည် အထီးကျန်နေနိုင်သည်။ အကြောင်းမှာ သူ၌မိတ်ဆွေ စစ်များမရှိသောကြောင့် ဖြစ်သည်။
Read more: မှန်ကန်သော ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးကို တည်ဆောက်ခြင်း...
ခရစ်ယာန်၏ ပျော်ရွှင်သောအသက်တာ၏ လျှို့ဝှက်ချက်
Practical Christian Living Course
Lesson 24 - ရဲလင်းထွန်း(အင်းစိန်)
သော့ချက်ကျမ်းပိုဒ်။ ဘုရားသခင်ကိုချစ်သောသူတည်းဟူသော ကြံစည်တော်မူခြင်းအတိုင်း ခေါ်တော်မူသောသူတို့၏ အကျိုးကို ခပ်သိမ်းသောအရာတို့ သည်
Read more: ခရစ်ယာန်၏ ပျော်ရွှင်သောအသက်တာ၏ လျှို့ဝှက်ချက်
ဓမ္မဟောင်းကျမ်း The Old Testament
သင်ခန်းစာ( ၃) စံဝင်းချို
သမ္မာကျမ်း၌အဓိကအစိတ်အပိုင်းကြီးနှစ်ပိုင်းရှိသည်။ ပထမအပိုင်းသည် ဓမ္မဟောင်းဖြစ်သည်။ ဒုတိယအပိုင်းသည် ဓမ္မသစ်ဖြစ်သည်။ ဓမ္မ္မဟောင်းတွင်ကျမ်းစာအုပ် ၃၉ အုပ်ပါဝင်ပါသည်။ ကမ္ဘာဦးကျမ်းဖြင့်စ၍ မာလခိအနာဂတ္တိကျမ်းဖြင့်ဆုံးသည်။ ဓမ္မဟောင်းတွင်ဘုရားသခင်လူသားများနှင့် ကမ္ဘာအစမှစ၍ သခင်ခရစ်တော်မွေးဖွါးသည်တိုင်အောင်၊ ဆက်သွယ်လုပ်ကိုင်မှုများကိုပုံပြင်သဖွယ် ဖေါ်ပြထားသည်။
ဓမ္မဟောင်းကျမ်းသည်။ပထမ ဟေဗြဲဘာသာဖြင့်ရေးသည်။ ဓမ္မဟောင်းကျမ်းစာ ၃၉ အုပ်သည်။အချို့သော မတူသောလူများကရေးသားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ဒီလူများသည်၊ ဘုရားသခင် သူတို့ကို မှာကြားချက် များ၊ အတိုင်းရေးသားကြပါသည်။
ဓမ္မသစ်တွင် ဤရေးသားသူများဘုရားသခင်၏ မှာကြားချက်များကိုမည်ကဲ့သို့လက်ခံရရှိကြသည်ကိုသိရ သည်။ အကြောင်းမူကား၊အနာဂတ္တိစကားသည် လူအလိုအားဖြင့်ဖြစ်ဘူးသည်မဟုတ်။ဘုရားသခင်၏ သန့်ရှင်းသူတို့သည်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏တိုက်တွန်းတော်မူခြင်းကိုခံရ၍ဟောပြောကြ၏။ (၂ပေ ၁း၂၁)
Read more: ဓမ္မဟောင်းကျမ်း The Old Testament
သမ္မာကျမ်းစာ၏ အခွင့်၊ အာဏာ၊ လုပ်ပိုင်ခွင့်များ
သမ္မာကျမ်းစာ၏ အခွင့်၊ အာဏာ၊ လုပ်ပိုင်ခွင့်များ။ စံဝင်းချို
ကျွန်ုပ်တို့တွင်အဆင့်အတန်းနှင့်အခွင့်အာဏာများအသက်တာတွင်အရေး၊ ကိစ္စ၊ အလုပ်အကိုင်များဆောင် ရွက်နိုင်ရန်ရှိကြရမည်။ အကယ်၍မရှိခဲ့လျှင်ဇဝေဇဝါဖြစ်ပေါ်နေမည်။နိုင်ငံတိုင်း၌အစိုးရရှိ၍အခွင့်အာဏာ၊ လုပ်ပိုင်ခွင့်များကိုအသုံးချကြသည်။
Read more: သမ္မာကျမ်းစာ၏ အခွင့်၊ အာဏာ၊ လုပ်ပိုင်ခွင့်များ